Maqaa Ji Oota Afaan Oromootiin
Daill Maqaa ji oota afaan oromootiin 04.09.2021 04.09.2021 Comments
Gama biraa tiin, afaan utubaa sabaa ti. Yo inni jiraate sabni jiraata. Inni duunaan akkuma yaroo utubaan caphu manni diigamutti, sabni niis dhabame.
Minilikii fii Habashoonni biyya inni dirqiin haqaare-rratti abbooman warra haala kana sirritti hubate. Kan nama dinqu, inni lammii Oromoo-rraa tahe duula kanaaf guuza ooluu dha. Muddee 13, bara , mootummaa Hayle Sillaasee gara-galchuuf ijibbaata Mangistuu Nawaay faan godhan irraa qooda qabdaan waan fardaa-lafaan barbaadameef, Ayyuub, biyyarraa baqachuu dirqamee, walakkaa bara Soomaaliyaa seene.
Yaroon Ayyuub biyya Soomaalee itti seene, yaroo mootummaan biyya sanii, nama raadiyoona isii keessaan Xoophiyaa-rratti olola ooftuuf itti barbaaddu ture.
Haalaa akkanatti deemu, dhuma sagantaa qophii isaa, Ayyuub, Afaan Oromoo tiin dhaamsa xixiqqaa daddabarsuu jalqabe. Haalli kuni, mootummaa Habashaa bira dabree, kan waahelaaf eegu dallansiise. Waahelli Ayyuub, ilmi Gaarradaw Cuuphataa, Ayyuub afaan raadiyoona-rratti ittiin haasawuun dhoorkamaa taheen dhaamsa dabarsaan baannatamee, biyya alagaa keessatti mana heeraa dhaabbate. Geetaachoon, absumaan Cuuphataa, Oromtichi, biyya Soomaalee keessatti afaan isaa gatee, kan Amaaraa tiif abokaattoo dhaabbate.
Gama biyya keessaa tiin durii fii arrallee, Oromoonni kan isaaniitti duuyda galanii, afaanii fii aadaa Amaaraa goddisuu keessatti qooda leencaa gumaachan heddu. Haalli ilma Gaarradawii fii jara olii afaanii fii aadaa isaaniitti duuyda galche, karoora Oromummaa dhamasiisuu tan Minilikiin jalqabamtee nafxanyaa fii gantootaan hamma yoonaa gaggeeyfamaa jirtu.
Karoora Xoophiyummaa fii amantii hagooggatee, waahelummaa goobanootaa fii gantootaa tiin Oromoo fii Oromummaa-rratti, heera malee, baroota dhibbaa fii shantamaaf bobbaafamaa jiru, milkooma hanqisuu fii hoongeeysuu-rratti murannoo cimtuun warra hojjatan keeysaa tokko Mahdii Haamid Muudee ti. Mahdiin, afaan isaa, afaan Oromoo, tiif anaannachuu kan jalqabe joollummaa ni.
Maddi kanaa mana barnootaa ti. Gaafa akka barnoota ammayyaa baratuuf mana barnootaa geeyfame, Maahdiin afaan isaa malee kan Amaaraa hin beeku ture.
Manni barnootaa ammoo afaan Amaaraa malee kan isaa kan hin dhageenye itti tahe. Kanaaf Mahdiin mana barnootaa keeysatti duudaa ykn nama afaan hin beeyne tahee arkame. Duudaa tahuun Mahdiif rakkoo hin turre. Dhibdeen afaan Oromoo dubbachuu isaa-rraa arraba, salphinaa fii tuffii, barsiiftoota-rraa kaasee hamma barattootatti itti xiyyeeffamuu dha. Haalli mana barnootaatti isa mudachaa jiru, sadarkaa duraatti kan silaa fedhii barnootaaf qabu keessatti cabsu ture. Mahdiin ammoo, karoora nafxanyaa lameenii fuu oggoluu dide.
Afaan isaa dubbachuu-rraa arraba, salphinaa fii tuffii mudachuun, inumaa, afaanii fii aadaa isaa waliin caalaa walitti kan hidhu tahe. Amata lama booda, achirraa, qabxii ol aantuun kudha lama goolabee, Universitii Finfinnee damee Kiiloo Afuriitti barataa saaynsii galmaawe. Akka barnoota universitii xumureen, magaalaa itti dhalatetti barsiisaa mana barnoota kutaa lamadaa tahe.
Gama biraa tiin, lakkuma umrii fii barnootaan if dura deemuun,Mahdiin afaanii fii aadaa isaa if barsiisutti bobbahe. Yaroo banoonni hin jirre baadiyyoota keessa daddeemee, mangoddootaa fii hayyootarraa afaan, aadaa fii seenaa saba isaa qorachuu fii if barsiisuu hoojumfate.
Hadraa manzuumaan afaan Oromoo keessaa dhaawwaaqamtu abuuruun walaloolee manzuumaa keeysaan akkaataa afaan Oromoo ittiin barreeyfamu qorachutti seene.
Fedhiin afaan isaa baruu fii guddisuu, oduma isa ooftuu Sheekh Bakhrii Saphaloo, hayyuu afaan Oromoo, tiin walitti fidde.
Mahdiin, eega haala Sheekh Bakhrii bare booda, hawwiin gaaf tokko ilmaan Oromoo afaan isaanii tiin barachuu qoma keessati uumamte. Hawwii tana warra hujiirra oolchan keessa tokko tahuu murteeyfatee, qamaa fii qalbiin itti bobbahe. Tan keessaa, tan afaan Oromoo tiif taatu wal madaalchifte. Karoorri kuni barattootaa fii ummata baadiyyaa Oromoo walitti fiduu malees, haala ummanni afaan isaanii tiin itti baratan kan aanjeeysu tahee as bahe. Mahdiin, kan kana sirritti hubate, qormaata afaan Oromoo barreeysuu-rratti godhaa ture, qindeeysitoota karoora Zamachaa tiif dhiheeyse.
Mahdiin waan lameen dhiheeyseef qaba. Qormaata lameen keeysaa kan qubee Laatiniin dhiheeyfame, afaan Oromoo ittiin barreeysuu akka tahu agarsiisuu fi. Yaroo Mahdiin karaa Bariisaa tiin afaan Oromoo guddisuuf itti marxifate tuni, yaroo, horteen nafxanyaa tan maqaa Ihaappaa tiin if jaarte, akkuma ammaa kanatti, Oromoo fii Oromummaa gurraan dhagayuu itti hin barbaanne ture.
Amna jiruu baqaa keessaa fii eega Ameerikaa qubatees, Mahdiin guddina afaan Oromoo tiif dhimmamuu takkaa hin dhiifne. Jiruu biyya Faranjii tan oriisaan isii hara nama hin fudhachiifne keessatti, yaroo hujii-rraa haftuuf kan irratti dabarsu irbuu gaafa joollummaa afaan Oromoo tiif seene. Kuusaan akka kitaaba Mahdii, kan fuula dhibba sagalii ol qabu, qaariyaa dhaabotaa ykn nafaqaa mootummaa tiin, namoota hedduun, kan qophaawuun irra ture malee, kan hujii nama tokkoo hin turre.
Mahdiin garuu, karoora guddaa bara kudha torbaa ol irraa fuudhateef nafaqaan godhate, murannoo sab-boonummaa cimtuu qofa ture.
Qormaata afaan Oromoo tiif daandii haaraya saaqe. Warra irraa barachuu barbaadaniif, kuurii jechootaa kan qabiyyeen keeysaa dubbuuyfamee hin dhumne tahe. Sanirratti afaan Oromoo akkuma kan Ingilizii sooreeysa tahuu agarsiise.
Kuusaan humna yaroo dheertuu malees Mahdii-rraa qabeenya hedduu fudhate. Kitaabichi sadarkaa Oromoo boonsutti akka maxxanfamu godhuuf horii itti dhangalaasullee, gaafa gurguraaf dhiheeyse, akka silaa hawwetti hin simatamneef. Akki san Mahdii naasisullee, murannoo afaan Oromoo guddisuuf qaburraa if duuba hin deebifne. Mahdiin Kuusaa isaa tiin haa beekkamuu malee, isa malees kitaabban Xalayootaa fii Walaloota Bariisaarratti barreeyfaman biratti, kanneen barnootaa torba maxxanse.
Gama biraa tiin, kitaaba seenaa tii fii kanneen biraa warra odoo hiree maxxansuu hin arkatin biraa boqote hedduu barreeysee jira. Haala kanaaf, karoora agarsiisa aadaa Oromoo tiif, dubraa fii dardara godinaalee Oromiyaa hunda keeysaa Gurraandhala 28, bara , Magaalaa Finfinneetti walitti fide warra qopheeysan keeysaa Mahdiin tokko. San malees, gaafa biyya Ameerikaa magaalaa Atlaantaa keessa jiraachaa ture, sagantaa raadiyoonaa kan Sagalee Oromiyaa moggaaseef yaroo dheertuuf mataa isaa tiin qopheeysee gaggeeysaa ture.
Mahdiin nama obboleeyyan soddoomii shan waliin dhalate. Nama arjummaa fii sab-boonummaan faayame. Kan fedhiin bilisummaa onnee keeysa danfitu. Taphataa, xiqqaa fii guddaa kabajaa fii jaalalaan simatu. Hayyuu fii barsiisaa barataan wa irraa baratee hin quufne. Rabbiin isaaf jannata, maatii fii firaaf jabina haa kennu!
January 19, 6 Minutes Naannoo guddicha Itiyoopiyaa — Oromiyaa guutuu keessatti Sadaasa bara eegalee akkasumas naanoo Amaaraatti Adoleessa bara eegale hirironni gurguddoofi hin eegamne godhamaniiru. Humnoonni tikaaa mootummaa Itoophiyaa haleellaa humnaa hiriirota baayyinaan nagaa turan irratti fudhataniin lubbuu namoota olii galaafataniiru.
Labsiin yeroo muddama kun gochoota heeddu haala ifa hin taaneen dhorkuurra darbee mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu, mirga gurmaayuufi hiriira nagaa bayuu dhorkeera. Qajeelfamni labsii sana booda bayes tooftaale hunootni tikaa duriyyuu ittiin mirga namaa dhiitaa turan kan akka ajaja mana murtii malee lammilee hidhuufa seera qabeessa godheera. Hiriironnii mormii kun kan gaggeeffaman haala qaawwaan siyaasa tokkoole hin jirre keessatti ture. Dhaabbileen siivikiifi midiyaaleen walabaas bilisaan akka hin hojjanne godhamaniiru.
Namoonni ifatti mootummaa hin deeggarre ajaja mana murtii malee nihidhamu, nireebamu. Boqonnaa Somaliyaa dubbisaa Bilisaan walgayuu Bara karoorri mootummaan daangaa magaala guddittii Finffinne gara naannoo Oromiyaatti baldhisuuf baasee mormii kutaa Oromiyaa mara waliin gaye kaasee ture. Humnootni tikaa mootummaas mormitoota irratti halellaa cimaa raawwatan.
Sababiin isaammoo mootummichi waadaa seenaa ture hedduusa cabsuun waan beekamuufi. Mormitoonni komee waggoottan kurnan hedduufi haleella humnaa dogoggooraa kan humnootni tikaa fudhatan mormaa turan. Mormitoonni iddo tokko tokkotti badii akka geessisan gabaasni muraasni ni agarsiisu.
Garuu bakka baayyeetti mormii isaanii karaa nagaatiin dhageessisaa turan. Ebilaafi Caamsa bara s mormiin walfakkatuufi haleellan humnoota tikaa walfakkaatu fudhatamanii turan. Yeroo mormiin kun adeemsifamaa ture humnootni tika mootumma Itoophiyaa barattoota kuma kurnaniin lakkaayaman, barsiisota, miseensota paartilee mormituu, hojjattoota fayyaa akkasumas namoota ijoolle poolisii jalaa baqataniif dawoo kennan ykn gargaaran gara mana hidhaattii guuraniiru.
Baayyeen namoota hidhamanii turanii hiikamanus namoonni lakkofsi isaanii hin beekamne gargaarsa seeraaffi daawwii maatii malee osoo himanni tokko irratti hin banamiin haga yoonaa mana hidhaa tursiifamaniiru.
Xiyyeeffannoon mormitoota naannoo Amaaraa inni guddaan walcaalmaa hirmaannaa aangoofi dinagdee biyyatti kan warra mootummicha deeggaran addatti fayyadu irratti mormii dhageessisuu ture. Hagayya 6 fi 7 qofatti humnootni tikaa mootumma naanno Oromiyaafi Amaara keessatti namoota ol ajjeesaniiru. Magaala Baahirdaar qofa keessatti namoota 30tu ajjeefame.
Magaalli Bahirdaar magaalota mormii uummanni garmalee guddaan irratti hirmaate keessumeessan keessa ishee tokko turte. Naanno Amaaraa guutuu keessatti ummata heddumminaan akka hidhanis gabaafameera. Naannoo Ummatoota Kibbaa zoonii koonsootti mormii uummanni naannoo koonsoo daangaa bulchiinsa irratti kaase ukkaamsuuf humnootni tikaa mootummaa Itoophiyaa dhalattoota Koonsoo kurnaniin lakkaayaman ajjeesaniiru.
Mootummaan ajjeechaa naannoo Oromiyaa, Amaaraafi Koonsootti raawwate sirnaan qorachuuf fedhi takkallee hin agarsiifne. Ragooleen ifatti jiran garuu faallaa gabaasa kanaa agarsiisu. Labsiin muddamaa Onkolooleesa baye mormii mootumman hin hayyamne mara dhorkeera. Naanoo koomandi poostin murteesse mara keessatti hanga labsiin muddama kun hin kaanetti ajaja mana murtii malee akka fedhanitti nama hidhuus hayyameera. Poolisiin addaa naannoo somaalee lola adda bilisa baasa Ogaaden ONLF waliin gochaa jiru keessatti dhiitta mirga nammooma garmalee guddaa raawwataa jira.
Namoota ONLF gargaaru ykn leellisu jedhamanii shakkaman murtoo seeraa malee ajjeesuun, seera malee hidhuufi reebuun gabaafamaa ture. Maatiin namoota daawwanna pirezidaantiin bulchiinsa naanno Somaale Abdii Illey Meelboorn, Awustiraaliyaatti Waxabajjii 12 mormanii Itoophiyaati hidhamaniiru. Bilisaan yaada ofii ibsachuufi ijaaramuu Miidiyaan biyyatti ammallee towannoo mootumma jalaa hin kan hin baane dha.
Inumayyuu labsii muddama dhuma bara bayeen towannoon mootumma garmalee itti jabaateera. Erga bara as yoo xinnatee gaazexeessitooni 75 biyya gadhiisani baqataniiru. Gaazexeessitoota doorsissun alattis toftaan mootumman ittin miidiyaa walabaa dangeessu maneen maxxansaa, maxxanssitootafi raabsitoota kiyeesuufaa dabalata.
Gaazexeessitoonni heddun kan akka Iskindir Naggaafi Wubishet Taayyee, namoonni hiriira nagaa irratti hirmaataniifi miseensonni paartilee mormituu maqaa labsii farra shorrorkeessumman hidhamanii jiru. Gaazexeessa Yusuuf Geetachoos Hagayya bara erga labsi farra shorrorkeessaan yakkamee waggaa 4 hidhamee booda Fulbaana 10 dhiifamaan mana hidhaatii gadhiifameera. Mootummaan Itoophiyaa marsariitota dhimmoota ijoo irratti seenessa mootumichaa gaaffii keessa galchaniifi miidiyaalee hawaasa dhaabbataadhaan uggura jira.
Yeroo mormiin ademsifama turetti uummuta kakaasuufi odeeffannoo facaasuu keessatti miidiyaale hawaasaafi dhaabbileen televiziyoona diyaaspoora gahee murteessa taphataniiru. Labsiin kun dhaabileen mormituus miidiyaa wajjin akka wal hinqunnamne dhorkeera. Labsiin dhaabbilee siviiki bara baye dandeettiifi hojii dhabbilee miti mootumma akkuma laamshessetti jira.
Imaammata misooma mootummaa qeequun garmalee hamaadha. Aktivistoonni kana godhan himatamaa jiru. Paastar Omot Agwaan yeroo baankin adunyaa badii investimentii baankiin walqabatu tokko qorachuuf garee qorattuu baankii adunyaa gara Itoophiyaatti erge ture garee kanaaf afaan hiikuufi haala mijeessuun nama hojjataa tureedha.
Himatni namoota lama Omot wajjin himatamanii Sadaasa darbe addaan citeera. Hidhaa seeran alaafi dararaa mana hidhaa Humnootni tikaa mootumma, poolisoonni federaalaa, humnoota waraana, poolisiin addaa akkasumas angawoota tikaa kan siviilii uffatan dabalate hidhamtootni siyaasa akka ofirratti raga bayaniif mana hidhaa dhoksaafi ifaatti beekamutti reebichaafi dararaa heddu rawwataniiru.
Namoonni mormii dhiyeenya kanarra qabamani hidhamani turan hedduun isaani mana hidhaattiifi kaampii waraanaatti reebichiifi dararaan akka irra gahee ture himatu. Dubartoonni heddus dhiibbaan saalaafi gudeedamuun akka irra gaye dubbatu.
Humnoota tikaa dhiittaa kana fakkaatu raawwatan irratti qorannoofi adambni akka fudhatame wanti ibsu hin jiru. Himatni pirojaktoonni misooma mootummaa qotee bultoota humnaan lafarra buqqisu jedhu dabalaa dhufe. Hawaasni sulula Oomoo keessa jiraatan lafti margaa isaani jalaa mancayeera, laga Oomoos akka fedhanitti akka hin fayyadamne dhorkamaniiru. Angawonni mootummaa bara ti lolaan nigadhiifama jedhanus faallaa waadaa isaani lolaa baayyee xiqqootu ture.
Lolaan laga Oomoo kun haroo Turkaanaa guutufi lafa qotiisaa lagicharra jiraniif barbaachisaadha. Qaamota adunyaa shoora murteessa taphatan Itoophiyaan arjoota biyya alaafi mootummoota naanooshee irraa gargaarsa guddaa argachaa jirti. Sababni isaas teessoo gamtaa Afrikaa waan taateef, gayee cimaa isheen naanno gaanfa Afrikatti taphattuuf, shoora isheen qama nagaa eegdu mootummoota gamtoomanii keessaatti taphattuuf, dhimmota farra shororkeessummaa, gargaarsaafi baqattoota irratti mootummoota dhiyaa wajjin waan hojjattuuf akkasumas guddina missomaa agarsiisa jirti jedhamuufi.
Gamtaan Afrikaafi Komishiniin mirga ummataafi namoomaa Afrikaa ibsa tarkaanfiin Itoophiyaa nuyaadessera jedhu baasaniiru. Paarlaamaan Awurooppa seeraafi ijannoo cimaa tokko gadhiiseera.
Arjoonii biroon akka baankii adunyaa akkuma waan humtu hin taaneetti ibsa ifaafi yaaddoo tokko otoo hin baasiin hojii isaani baratame itti fufanii jiru. Garee mirga namooma addaa mootummoota gamtoomanii wajjin hojjachuuf fedhii akka hin qabne seenasheerra osoo beekamuu mana maree mirga namooma mootummoota gamtoomaniitis itti aana pirezedantii taatee jirti. Gayee kana hunda otoo achi keessa qabduullee Itoophiyan gareen mirga namooma addaa mootummoota gamtoomanii akka biyyashe hinseenne dhorkiteerti.
Gareen mirga namoomaa addaa mootummoota gamtoomani Itoophiya kan seenan yeroo dhumaaf bara , yeroo gareen dhimma Eertira qoratu dhaqe qofa ture.
Hadraa manzuumaan afaan Oromoo keessaa dhaawwaaqamtu abuuruun walaloolee manzuumaa keeysaan akkaataa afaan Oromoo ittiin barreeyfamu qorachutti seene. Fedhiin afaan isaa baruu fii guddisuu, oduma isa ooftuu Sheekh Bakhrii Saphaloo, hayyuu afaan Oromoo, tiin walitti fidde. Mahdiin, eega haala Sheekh Bakhrii bare booda, hawwiin gaaf tokko ilmaan Oromoo afaan isaanii tiin barachuu qoma keessati uumamte.
Hawwii tana warra hujiirra oolchan keessa tokko tahuu murteeyfatee, qamaa fii qalbiin itti bobbahe. Tan keessaa, tan afaan Oromoo tiif taatu wal madaalchifte. Karoorri kuni barattootaa fii ummata baadiyyaa Oromoo walitti fiduu malees, haala ummanni afaan isaanii tiin itti baratan kan aanjeeysu tahee as bahe.
Mahdiin, kan kana sirritti hubate, qormaata afaan Oromoo barreeysuu-rratti godhaa ture, qindeeysitoota karoora Zamachaa tiif dhiheeyse. Mahdiin waan lameen dhiheeyseef qaba. Qormaata lameen keeysaa kan qubee Laatiniin dhiheeyfame, afaan Oromoo ittiin barreeysuu akka tahu agarsiisuu fi. Yaroo Mahdiin karaa Bariisaa tiin afaan Oromoo guddisuuf itti marxifate tuni, yaroo, horteen nafxanyaa tan maqaa Ihaappaa tiin if jaarte, akkuma ammaa kanatti, Oromoo fii Oromummaa gurraan dhagayuu itti hin barbaanne ture.
Mahdiin garuu, karoora guddaa bara kudha torbaa ol irraa fuudhateef nafaqaan godhate, murannoo sab-boonummaa cimtuu qofa ture. Qormaata afaan Oromoo tiif daandii haaraya saaqe. Warra irraa barachuu barbaadaniif, kuurii jechootaa kan qabiyyeen keeysaa dubbuuyfamee hin dhumne tahe. Sanirratti afaan Oromoo akkuma kan Ingilizii sooreeysa tahuu agarsiise. Kuusaan humna yaroo dheertuu malees Mahdii-rraa qabeenya hedduu fudhate. Kitaabichi sadarkaa Oromoo boonsutti akka maxxanfamu godhuuf horii itti dhangalaasullee, gaafa gurguraaf dhiheeyse, akka silaa hawwetti hin simatamneef.
Yeroo mormiin ademsifama turetti uummuta kakaasuufi odeeffannoo facaasuu keessatti miidiyaale hawaasaafi dhaabbileen televiziyoona diyaaspoora gahee murteessa taphataniiru.
Labsiin kun dhaabileen mormituus miidiyaa wajjin akka wal hinqunnamne dhorkeera. Labsiin dhaabbilee siviiki bara baye dandeettiifi hojii dhabbilee miti mootumma akkuma laamshessetti jira.
Himatni namoota lama Omot wajjin himatamanii Sadaasa darbe addaan citeera. Hidhaa seeran alaafi dararaa mana hidhaa Humnootni tikaa mootumma, poolisoonni federaalaa, humnoota waraana, poolisiin addaa akkasumas angawoota tikaa kan siviilii uffatan dabalate hidhamtootni siyaasa akka ofirratti raga bayaniif mana hidhaa dhoksaafi ifaatti beekamutti reebichaafi dararaa heddu rawwataniiru. Namoonni mormii dhiyeenya kanarra qabamani hidhamani turan hedduun isaani mana hidhaattiifi kaampii waraanaatti reebichiifi dararaan akka irra gahee ture himatu.
Dubartoonni heddus dhiibbaan saalaafi gudeedamuun akka irra gaye dubbatu. Humnoota tikaa dhiittaa kana fakkaatu raawwatan irratti qorannoofi adambni akka fudhatame wanti ibsu hin jiru. Himatni pirojaktoonni misooma mootummaa qotee bultoota humnaan lafarra buqqisu jedhu dabalaa dhufe. Hawaasni sulula Oomoo keessa jiraatan lafti margaa isaani jalaa mancayeera, laga Oomoos akka fedhanitti akka hin fayyadamne dhorkamaniiru.
Angawonni mootummaa bara ti lolaan nigadhiifama jedhanus faallaa waadaa isaani lolaa baayyee xiqqootu ture. Lolaan laga Oomoo kun haroo Turkaanaa guutufi lafa qotiisaa lagicharra jiraniif barbaachisaadha. Qaamota adunyaa shoora murteessa taphatan Itoophiyaan arjoota biyya alaafi mootummoota naanooshee irraa gargaarsa guddaa argachaa jirti. Sababni isaas teessoo gamtaa Afrikaa waan taateef, gayee cimaa isheen naanno gaanfa Afrikatti taphattuuf, shoora isheen qama nagaa eegdu mootummoota gamtoomanii keessaatti taphattuuf, dhimmota farra shororkeessummaa, gargaarsaafi baqattoota irratti mootummoota dhiyaa wajjin waan hojjattuuf akkasumas guddina missomaa agarsiisa jirti jedhamuufi.
Gamtaan Afrikaafi Komishiniin mirga ummataafi namoomaa Afrikaa ibsa tarkaanfiin Itoophiyaa nuyaadessera jedhu baasaniiru. Paarlaamaan Awurooppa seeraafi ijannoo cimaa tokko gadhiiseera. Beektota keenya meeqa dhabne, jaallan koo warran beeku meeqatu dhume? Ana malee kan hafe jirayyuu natti hin fakkaatu. Kana kana yeroo ilaaltu ABO ebeluu, jettee waan asiifii achi qabdu miti.
Obbo Ibsaa: Oromoon saba guddadha. Waan baayyee keessatti warra kaan waliin walqixxee hin hirmaatan jechuudha. Madaallii kamiinuu yoo ilaalames afaan kamiiniyyuu gadi miti Afaan Oromoo. Maaliif biyyasaa keessatti afaan Federaalaa hin taane kan jedhu sammuu Oromoota hundaa keessa jira. BBC: Konfiransii irratti hirmaachuuf gara biyyaa deebitanii maalif hidhamtan?
Walgahii kanarratti murtee tokkorra geenyee turre. Murteen kunis konfiransii guddaa biyyatti gallee qopheessina kan jedhudha. Dhaabbileen hunduu, Wayyaanee dabalatee kanumarratti waliigallee gara biyyaatti deebine.
Biyya dhufee gara mana kiyyaan deeme. Mana kiyyatti loltoonni hedduun dhufanii na fuudhanii deemuun mana hidhaa nagalchan. Torbee sadiif erga na hidhanii booda na gadhiisan.
Walgahii sana dhaabni keenya hin fudhannu waan jedheefin hidhaadhaa baanan bakka hayyu duroonni keenya jiran Landan deeme. BC: Obbo Leencoo Lataa akkamitti isin hiiksisuuf dhufan ture?
Obbo Ibsaa: Obbo Leencoon yeros waan isa tuqe hin beeku. Ani yakkaanin hidhame. Biyyattiitti waayi balleeseera jedhameetin hidhame. Yakkarrattimmoo nama bakka hin buutu, yoon ani yakka hojjedhe anumatu itti gaafatama jechuudha. Isaan dhufuu isaanii karaarra yeroo gahan dhageenye.
Hyundai i10 body parts
What is gom in ship stability
thoughts on “Maqaa ji oota afaan oromootiin”
05.09.2021 at 11:56
07.09.2021 at 07:19
08.09.2021 at 06:25
Zujar on Maqaa ji oota afaan oromootiin
Copyright © 2021 Maqaa ji oota afaan oromootiin. Powered by WordPress. Theme: Accelerate by ThemeGrill.